Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Värmlands län / Filipstad
1,712 kiilomitir oo laba jibaaran
Karlstad 61 kiilomitir
Örebro 96 kiilomitir
Stockholm 297 kiilomitir
Miyaad guri ka raadinaysaa Filipstad? Dhanka shirkada guryaha ee Filipstadbostäder waxaad ka helaysaa guryaha banaan. Bogga intarnatka ee degmada waxaa ku jira xitaa shirkadaha guryaha kale iyo dilaaliinta guryaha iibiya.
Degmada baaxadeed waxaa ku dhexyaalo in ku filan oo goob isboorti iyo jimicsi, tusaale ahaan goobta hawo-qaadashada ee Kallhyttans oo ka mid ah meesha ugu casiyeeysan iswiidhan ee xagga goobooyinka leh barafka sanceeysan iyo jid-socod oo ku dhexyaalo bey'ad dabiicad qurxoon.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Filipstad